U-Anja Schaap utholakale efile olwandle ngomkhumbi waseJalimane? Ingabe lokho kungenzeka ngokusho kwemithetho yemvelo? : UMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-19 Juni 2019	• 5 Amazwana
Ngokusho kokushicilelwa kweziningana (ANP nguJohn de Mol, umkhiqizi weTV) u-Anja Schaap (33) izolo ntambama e-13: I-30 (futhi i-33 phakathi nendawo) ihora etholakala olwandle. Ezihlokweni zami zangaphambili ngaveza ukuthi u-Anja Schaap ulahlekile mhlawumbe ungu-PsyOp (ukusebenza kwengqondo).
Ukuze kube lula thina sicabanga ukuthi u-Anja Schaap wangena olwandle, ngemuva kokuba ephethe iqembu nomndeni esitolo (kodwa e-Opsporing Verzocht ngokuzumayo kwakukhona ilungu lomndeni kuphela futhi lingabonakala "kuzo zonke izinhlobo zamakhamera ezokuvikeleka" (ukukhiqizwa kukaJohn de Mol?) (kuze kube sebusuku), khona-ke umbuzo ngowokuqala kungakhathaliseki ukuthi umzimba uphela ogwini noma uvuselelwa yini okwamanje? Ngaleso sikhathi kunjalo (ngokusho i-website katwijk.info) E-Ebb ku-Katwijk aan Zee, ngakho-ke ungacabanga ukuthi bakhethe kahle isikhathi (uma kuyi-PsyOp) noma ukuthi "i-Anja" kungenzeka ukuthi ikhuphuke (noma yalahla olwandle).
Umbuzo wesibili ukuthi kuthatha isikhathi eside kangakanani ukuba umzimba udilize futhi uma uzophinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde up Kungani lo mbuzo usebenza? U-Anja Schaap ulahlekile kusukela ngoLwesibili 28 May 2019. Lamaviki angu-3 nezinsuku ze-2 ezivela ezingekho ukuze zithole. I-North Sea ayikwazi ukuthathwa njengendawo yamanzi ashisayo. Njengoba u-Anja Schaap angeke abizwe ngesibindi kuvidiyo ye-Opsporing Verzocht, uzobe esejubane ngokushesha (uma engabuyeli ogwini). Umzimba oshonile ufika phezulu ngemuva kwamasonto ambalwa ngenxa yokuvuvukala kanye nokwakheka kwegesi enqubo yokubola yomzimba (bheka lapha noma i-Google ngisho). Njengoba unikezwe umzimba ka-Anja obuthakathaka, le nqubo kumele ukuthi ithathe amasonto ngaphambi kokuthi ifike phezulu. Kungenzeka kanjani ukuthi umzimba wakhe uzovele uhambile phezulu (ucabanga ukuthi indaba iqinisile)? Kungenzeka nje kwenzeke. Kodwa akunakwenzeka yini ukuthi kufanele abuyele emuva emhlabathini?
Iyini ithuba lokuthi umkhumbi waseJalimane (uhlobo luni lomkhumbi?) Uzoyibona elwandle olwandle? Angiyona ingcweti engenzeka, kodwa nginikezwa konke ukuguqulwa kwezindaba, ukucindezela kohlelo lokusebenza lukaSherlock Holmes 'kanye nokuthi yonke ikhasi le-Facebook lika-Anja Schaap (kufaka phakathi ikheli lakhe elichazwe ekhaya) lizungeze uSherlock Holmes , kwangathi singazibuza ukuthi lokhu akusiyo i-PsyOp ukuze kuzuze uhlelo lokusebenza lwe-Sherlock Holmes (uhlelo olukhulu lwezinhloli ze-data)? Funda ngaphakathi lesi sihloko incazelo eningiliziwe.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: ad.nl, katwijk.info, quora.com
U-Anja Schaap watholakala efile olwandle ngaphezu kweziqhingi zaseWadden, kodwa yikuphi umkhumbi (myshiptracking.com)?
U-Anja Schaap waseKenya ngoLwesihlanu olulandelayo "wangcwatshwa" emjikelezweni ovalwe
Amathegi: Anja, ukufa, IsiJalimane, afakiwe, okutholiwe, in, I-Katwijk, psyop, Izimvu, umkhumbi, zee
20 Juni 2019 ku-00: 36
Kusobala kanjani ukuthi uPhenyo unikeza izinhlelo ezihlelwe ngokwezifiso.
U-Anja uhamba emgwaqweni futhi awuboni noma yisiphi isithunzi.
U-Anja uhamba ngaphakathi kweBlauwen Bock futhi ukukhanya kuphazamisa.
Futhi kungani ifilimu yama-youtube ye-Opsporing Verzocht ingaxhunyiwe kwi-inthanethi amahora?
Isikhathi u-Anja angena kwi-Grand Cafe asihambisani! ngewashi le-jeweler eceleni kwesitolo esivame ukugijima ngesikhathi.
Isithunzi osibona ohlelweni lokuThola Ukufunwa singase sibe yi-Maxima, akucaci futhi kamuva kuhlelo bayavuma
I-100% inkohliso, ngiphinde ngithi akukho okunye okunye, yisikhathi sezinto ezifana nalezi
thola isahlulelo somphakathi
i-nml, Ulwazi olungamanga mayelana nezindaba ezihilelekile ezilahlekile nokukhohliswa kwazakhamuzi ze-17.000.000
20 Juni 2019 ku-06: 50
Uma umuntu ebona izithombe ke akulungile. I-1) ikhamera yokubhekwa ngaphandle kwe-nr1 2) ngokushesha nje uma u-Anja engaphakathi kwekhamera yokubhekisisa nr 2 ne-3) ikhamera yokubhekwa kwe-3 ehloselwe labo bantu abangu-2 ebhasini.
Ngombono wami u-1 yiqiniso futhi i-2 ne-3 ziqoshiwe ngokusho kweskripthi futhi azihlangani nhlobo. futhi Bakerstreet ngokusho Facebook of Anja akekho (google "ibalazwe Katwijk").
Ake sithi ayikho i-3 eyobe ingokoqobo ngakho umbuzo uwukuthi "yisiphi isisusa sokuthi ukhombe ikhamera kulaba bantu be-2?". Ngombono wami, akukho sizathu, ngoba ngaleso sikhathi akukho mbuzo olahlekile ngaphandle uma ......
Ngakho i-3 ayikwazi ukuyiqiniso. Inhlanganisela nr 1 ne-nr 2 ayinakwenzeka. Konke kwahamba ngokusho kweskripthi esenzelwe kusengaphambili. Uma umuntu eqhathanisa lokhu nemifanekiso yekhamera yeBelgium elahlekile e-Australia (ekugcineni ibonwe esitolo) ke lokho ku-Anja kucacile njengoba uMartin uthe i-psyop.
20 Juni 2019 ku-09: 27
Ngokuqondile ... lezo zithombe zekhamera zidutshulwa kahle kakhulu.
Isikhwama kufanele sihlolwe isikhathi esiningi ngoba u-Anja uye waphonsa isikhwama sakhe kude (ngakho ucingo lwakhe aluzange lushiye i-gauge) ngokusho kwendaba. Ngakho-ke isikhwama kufanele sibe esithombeni ... kaningi
Ngubani ohamba ekhaya phakathi nobusuku ehamba? Iphi lapho iqembu lomndeni laya khona ngokuzumayo? Le ndaba manje ishintshelwa kuphela ilungu lomndeni we-1 (owayehlala naye kubha).
Indaba enhle futhi njengoSiebe Viegers kukhona isidumbu .. psyop ekupheleni. Iya kokulandelayo. Sesha nokho! Kuba mnandi ngaphezu kwe-Pokemon Go!
20 Juni 2019 ku-07: 23
Kuthiwa umkhumbi waseJalimane. Yayiyini igama lolo mkhumbi? Inombolo yesikebhe?
Ngicabanga ukuthi kukhona amawebhusayithi noma izinhlelo zokusebenza ongayisebenzisa ukuze uthole indlela yomkhumbi. Ngubani oh ozokhipha lokhu? Ingabe isidumbu sithathwe emkhunjini waseJalimane ngomkhumbi waseDutch noma umkhumbi waseJalimane wamyisa emgodini? Ngikholelwa ukuthi imikhumbi engena eNetherlands yonke ibhaliswe. Ingabe uhlala endaweni yokulala manje? Ubani owaziyo ngalokho?
20 Juni 2019 ku-10: 29
Yeka ukuthi sifuna ukwenza kanjani ubuwula?
Bheka emlandweni we, ukuthi uthola kude kangakanani nogwini?
Akukho mkhumbi omile naleso sikhathi. Cishe bonke bakwenza eduze kwama-9, ngakho?
futhi uqaphele lokhu okulandelayo,
Zonke izinto zazisesikhwameni sakhe, zaze zabiza, "Zonke" izinto zayo
Ngeviki lesibili liye lishaya futhi lizulu kakhulu, umoya kufanele ube wageza umzimba emanzini.
Siye sabona ukuthi masinyane kanjani okuhamba neziqukathi ezazihlanjwe kusukela emkhunjini wesitsha ngonyaka odlule.
Bazi kanjani masinyane kangaka ukuthi yi-Anja, umzimba kufanele ube sekude kakhulu kokuqedwa emva kwamasonto amathathu, ngakho-ke uyisisulu, kungakhathaliseki ukuthi kuzwakala kanjani
Kungani kungenakho ukucinga okukhulu kwemikhakha engenzeka eqalwe ngumlindi ogwini?
kungani singenayo imifanekiso yesilonda esogwini eya emkhunjini waseJalimane?
kungani umphathi wesikebhe ongenakunakekelwa umkhumbi engakhulunywa ngaye?
I-1000 ifuna abantu futhi induna ingathola nje umzimba olwandle?
Ngaphezulu kweziqhingi zase-Wadden, ngakho-ke akunakwenzeka ukuba uphonseke olwandle kuze kufike emifuleni ogwini!
Yebo ku fabeltjeskrant konke kungenzeka, bheka i-tidal yamanje map coast coast Holland, yamanje ugijima njalo amahora ayisithupha
Ngakho-ke umzimba kufanele uphonswe olwandle ngaphezu kwebanga Texel / Den-Helder, ngoba kungenjalo kufanele kugezwe ogwini ogwini.
Konke kungenzeka, kodwa kuyamangalisa
I-Katwijkers nayo iyazi kangcono
Kungani kungenjalo umkhumbi ogwini noma i-heli, kungani kungabikho ifilimu, inhlanzi ebolile ayiphunga kabi njengaleli cala
« U-Anja Schaap angabona izithombe 'kuPhenyo oluceliwe' ngakho-ke akukho PsyOp?
U-Anja Schaap watholakala efile olwandle ngaphezu kweziqhingi zaseWadden, kodwa yikuphi umkhumbi (myshiptracking.com)? »
Ukuvakashelwa okuphelele: 15.804.006
Ngubani noma yini ebangela ukushayisana kwendiza yase-Iranian ngendiza ye-Boeing 737-800 ye-PS752?
I-Iran ihlehlela emuva, i-US ithumela ama-B52s kanye nokuhlukaniswa kwezindiza ezingama-82 ngemuva kwalokho abagibeli bezindiza abangu-180 baphuka
UMartin Vrijland op Ngubani noma yini ebangela ukushayisana kwendiza yase-Iranian ngendiza ye-Boeing 737-800 ye-PS752?
Ukushona kwelanga op Ngubani noma yini ebangela ukushayisana kwendiza yase-Iranian ngendiza ye-Boeing 737-800 ye-PS752?
Willem S op Umeluleki wezepolitiki uhlongoza ukwakha amakamu okufunda kabusha!
Umbhalo okule webhusayithi uzohunyushwa ngokuzenzakalelayo. Uma ubona noma yimaphi amaphutha angajwayelekile embhalweni, kungenxa yale software. Sicela usithinte ngefomu lokuxhumana ukubika lokhu.